Zava-dehibe amin’ny fampandrosoana ny fananana tahirin-kevitra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Noho ny fahatsapan’ireo Firenena mikambana ao amin’ny Unesco fa tandindomin-doza ireo tahirin-kevitra mitahiry tantara eo anivon’izao tontolo izao no antony nananganana ny « Mémoire du monde » tamin’ny taona 1992. Raha simba sy very anefa ireny vakoka manan-tantara ireny ireny dia hisy ampahany amin’ny tantaran’ny zanak’olombelona mihitsy no ho simba sy very.
Nisy ny fanadihadiana nataon’ny Unesco ny taona 2020. Nahafahana nandrefy ny fahasimban’ny tahirin-kevitra mitahiry tantara manerana izao tontolo izao.
Araka izany dia noraisin’ny Vaomieram-pirenena malagasy ho an’ny Unesco, rantsana iray ao anivon’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, ho adidy sy andraikitra ny anjara biriky amin’ny fikajiana sy fitandroana ary fampahafantarana ireo tahirin-kevitra manan-tantara malagasy amin’ny fananganana ny Comité National Mémoire du monde eto Madagasikara. Natao izany mba ahafahan’ny Malagasy sy ny rehetra mahalala bebe kokoa ny tantaran’ny fiaraha-monina malagasy. Fa betsaka ny dingana vita teto Madagasikara raha ny resaka kolontsaina sy ny vakoka no jerena. Manaporofo izany ny fananantsika ireo archives royales 1824-1897. Voasoratra ao anaty registre Mémoire du monde ny fisian’ireo tranom-bakoka malagasy maro, ary indrindra ny ezaka ataon’ireo mpisehatra amin’ny fikajiana, fitandroana, ary fampahafantarana ireo tahirin-kevitra mitahiry tantara. Mbola betsaka ireo ezaka tokony hatao raha ny fitahirizana ny tahirin-kevitra no lazaina.
Fikambanana sy rafitra mahatratra 20 manerana ny Nosy ary miasa miompana amin’ny tahirieala no nandray anjara tamin’ny atrika naharitra roa andro. Natao tao Antanimena ny 16 sy 17 septambra teo. Mampanantena ity komity najoro ity fa hanokatra ny adihevitra sy fikaonan-doha momba ny fampiroboroboana, fikajiana fahafantarana ny vakoka ary ny fiaraha-miasa eo amin’ny governemanta sy ireo andrim-panjakana miompana amin’ny fikajiana ny tahiriela hoy i Manda Ravelojaona, sekretera jeneralin’ny Komity nasionaly ity.
Mila mijery ny tany aloha mba ahafahana mandroso haingana. Zava-dehibe ny mahafantatra ny tantara tany aloha rehetra tany. Ny zavatra iaraha-mahita sy mahalala aloha dia ny bokin-tany tao amin’ny domaine izay potika. Tsy misalasala ny ampahany amin’ny Malagasy no tsy mivaky loha amin’ireny tahirin-kevitra ireny, raha tsy hiteny afa tsy ny fandorana ny Radio sy televiziona malagasy isak’izay misy korontana izao. Mila fanabeazana izany. Ho sahirana ny Firenena tsy mahalala ny tantarany. Raha ny any an-tsekoly dia vitsy dia vitsy ny tantaram-pirenena ianaran’ny mpianatra.
Manan-kasina ny tahirin-kevitra satria mitahiry ny fomba fiainan’ireo raiamandreny tany aloha. Vitsy amin’izy ireny sisa no fantatra. Izany angamba no mahatonga antsika tsy manana hazon-damosina amin’izao fotoana izao, ka mandray ny avy any ivelany ho tsara foana. Ary nametraka ny fihavanana ho eny an-jorom-bala, misy manko no milaza fa « ny vazaha mody miady fa ny Malagasy mody miombona ». Eritrereto ihany !
Savah Group : Namoaka ny DVD voalohany mitondra ny lohateny 'Ry Jesoa mofon’aina' - il y a 13 jours
Maison d'éditions : Lancement des Editions Project’îles - il y a 28 jours